Iwu Ego Ego na usoro ya - Law & More B.V.
blog » Iwu Nkwụnye ego na usoro ya
Iwu Nkwụnye ego na usoro ya
Na mbụ anyị dere a blọgụ gbasara ọnọdụ nke enwere ike itinye akwụkwọ mgbazinye ego yana ka usoro a si arụ ọrụ. Ewezuga odida (nke ahaziri na Mbụ M), Iwu Ego Ego (na Dutch the Faillissementswet, nke a na -akpọ 'Fw') nwere usoro abụọ ọzọ. Ya bụ: moratorium (Mbụ nke Abụọ) na atụmatụ idozigharị ụgwọ maka mmadụ eke (aha nke atọ, nke a makwaara dị ka Ụgwọ na -ahazi Iwu Ndị Mmadụ ma ọ bụ na Dutch Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 'WSNP'). Kedu ihe dị iche n'etiti usoro ndị a? N'isiokwu a anyị ga -akọwa nke a.
Nke mbu, Fw na -ahazi usoro mbinye ego. Usoro ndị a na -agụnye mgbakwunye akụ nke onye ji ụgwọ maka abamuru nke ndị ji ụgwọ. Ọ na -emetụta mkpokọta mkpokọta. Agbanyeghị na enwere ike ịdị mgbe niile maka ndị na -akwụ ụgwọ ka ha chọọ mmezi n'otu n'otu na mpụga ego dabere na ndokwa nke Usoro Usoro Obodo (na Dutch. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ma ọ bụ 'Rv'), nke a abụghị nhọrọ ọha na -achọsi ike. Ọ bụrụ na etinyere usoro mkpokọta mkpokọta, ọ na -azọpụta ọtụtụ usoro dị iche iche maka inweta aha nwere ike ịmanye yana itinye ya n'ọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na -ekewa akụ nke onye ji ụgwọ n'ụzọ ziri ezi n'etiti ndị na -agbazinye ego, n'ụzọ dị iche na usoro nke onye ọ bụla, ebe enweghị usoro ọ bụla.
Iwu gụnyere ọtụtụ ihe enyere maka usoro a nke mkpochapụ mkpokọta. Ọ bụrụ na enyere iwu mbinye ego, onye ji ụgwọ ga -atụfu mkpofu na njikwa nke akụ (ala na ụlọ) nke mepere emepe maka mgbake dabere na Nkeji edemede 23 Fw. Tụkwasị na nke a, ọ gaghịzi ekwe ndị na -agbazinye ego aka ịchọ mgbazi n'otu n'otu, yana mgbakwunye niile etinyere tupu mwepu ego (Nkeji edemede 33 Fw). Naanị ohere maka ndị na -agbazinye ego n'ụkwụ ego iji kwụọ ụgwọ ebubo ha bụ itinye akwụkwọ ndị a maka nkwenye (Nkeji edemede 26 Fw). A na -ahọpụta onye na -ahụ maka ego na -akwụ ụgwọ onye ga -ekpebi nkwenye ahụ ma jikwaa ma dozie ala ahụ maka abamuru nke ndị na -agbakọ ụgwọ (Nkeji edemede 68 Fw).
Nkwụsị nke ịkwụ ụgwọ
Nke abuo, FW na -enye usoro ọzọ: nkwụsị nke ịkwụ ụgwọ. Ebumnuche nke usoro a abụghị ka ekesaa ego onye ji ya n'ụlọnga dị ka odighi akụ, kama ka edobe ya. Ọ bụrụ na ọ ka ga -ekwe omume ịpụ na ọbara ọbara wee si otú a zere odida, nke a ga -ekwe onye ji ụgwọ ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ chekwaa akụ ya n'ezie. Ya mere, onye ji ụgwọ nwere ike itinye akwụkwọ maka nkwụsị ma ọ bụrụ na ọ nọghị n'ọnọdụ ọ kwụsịrị ịkwụ ụgwọ ya, mana ọ bụrụ aka na ọ ga -anọ n'ọnọdụ dị otu a n'ọdịnihu (Nkeji edemede 214 Fw).
Ọ bụrụ na enyere ikike moratorium, enweghị ike ịmanye onye ahụ ji ụgwọ ka ọ kwụọ ụgwọ ebubo nke moratorium kpuchiri, kwụsịtụrụ mgbachi, na mgbakwunye niile (ịkpachara anya na ndị a na -amanye) kagburu. Echiche dị n'azụ nke a bụ na site n'iwepụ nrụgide, enwere ohere maka ịhazigharị. Agbanyeghị, n'ọtụtụ oge nke a anaghị eme nke ọma, n'ihi na ọ ka nwere ike ịmanye nkwupụta nke etinyere na ya (dịka ọmụmaatụ n'ihe gbasara ikike ijigide ma ọ bụ ikike nkwa ma ọ bụ nnyefe ego). Ngwa maka moratorium nwere ike gbanyụọ mgbịrịgba mkpu maka ndị ji ụgwọ a wee gbaa ha ume ka ha kwusi ike ịkwụ ụgwọ. Tụkwasị na nke a, ọ bụ naanị na ọ ga -ekwe omume onye ji ụgwọ ịhazigharị ndị ọrụ ya.
Ndozi ụgwọ nke ndị mmadụ
Usoro nke atọ na Fw, nhazigharị ụgwọ maka mmadụ nkịtị, yiri usoro mbinye ego. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ na -agbaze site na njedebe nke usoro mgbazinye ego, ndị na -akwụ ụgwọ enweghịzi onye ji ụgwọ ma ha enweghị ike nweta ego ha. N'ezie, nke a abụghị maka mmadụ nkịtị, nke pụtara na ụfọdụ ndị ji ụgwọ nwere ike ịchụ ndị ji ụgwọ ụgwọ maka ndụ ha niile. Ọ bụ ya mere, mgbe nkwubi okwu na -aga nke ọma, onye ji ụgwọ nwere ike jiri usoro mweghachi ụgwọ kwadoo ya.
Esemokwu dị ọcha pụtara na ụgwọ onye akwụghị ụgwọ na -agbanwe ka ọ bụrụ ọrụ ebumpụta ụwa (Nkeji edemede 358 Fw). Iwu anaghị akwado ndị a, yabụ na enwere ike ịhụ ha dịka ọrụ dịịrị omume. Iji nweta slate a dị ọcha, ọ dị mkpa na onye ji ya ụgwọ na -eme ike ya niile dịka o kwere mee n'oge usoro nhazi iji nakọta ego ole o kwere mee. A na -agbakọ akụkụ buru ibu nke akụ ndị a, dị ka ọ dị na usoro mwepu ego.
A ga -enye arịrịọ ndozigharị ụgwọ naanị ma ọ bụrụ na onye ji ụgwọ ji ezi obi mee ihe n'ime afọ ise bu ụzọ rịọ arịrịọ ahụ. A na -echebara ọtụtụ ọnọdụ echiche na ntule a, gụnyere ma ụgwọ ma ọ bụ akwụghị akwụrụ nwere nkatọ yana oke mbọ iji kwụọ ụgwọ ndị a. Ezi okwukwe dịkwa mkpa n'oge na mgbe a na -ekpe ikpe. Ọ bụrụ na enweghị ezi okwukwe n'oge a na -ekpe ikpe, enwere ike ịkwụsị ikpe ahụ (Nkeji edemede 350 paragraf 3 Fw). Ezi okwukwe na ngwụcha yana mgbe ikpe gachara bụkwa ihe ndabere maka inye na idobe cha cha dị ọcha.
N'isiokwu a, anyị enyela nkọwa dị mkpirikpi banyere usoro dị iche iche na Fw. N'otu aka, enwere usoro mmiri mmiri: usoro mgbazinye ego na usoro ịhazi ụgwọ nke na -emetụta naanị ndị mmadụ. N'ime usoro ndị a, akụ nke onye ji ụgwọ ga -agbakọta ọnụ maka abamuru nke ndị ji ụgwọ. N'aka nke ọzọ, enwere nkwụsị nke usoro ịkwụ ụgwọ nke, site na 'ịkwụsịtụ' ụgwọ ịkwụ ụgwọ ndị na -akwụghị ụgwọ, nwere ike mee ka onye ji ụgwọ nweta ihe ọ na -eme n'usoro wee si otú a zere mmefu nwere ike ime. Ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Fw na usoro ọ na -enye? Mgbe ahụ biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọka iwu anyị bụ ọkachamara n'iwu insolven ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka!
Previous Post Usoro na ọnọdụ nzụta izugbe: B2B
Next Post Nkebi nke enweghị asọmpi: gịnị ka ị kwesịrị ịma?